ဝမ်းဘဲ - ဝီကီပီးဒီးယား
မြန်မာနိုင်ငံ အမြို့မြို့အရွာရွာတွင် ဝမ်းဘဲကိုတွေ့နိုင်သည်။ အမြီးနှင့် အနောက်ဘက်ပိုင်းတွင် အလွန်နက်သည့် အရောင်ရှိပြီးလျှင် အတောင်များကို ပိတ်ထားသောအခါတွင် အဖြူစင်းကြီးရှိသဖြင့် ဝမ်းဘဲသည်ထူးခြားသည်။ ခြေထောက်များမှာ တောက်ပသည့် အနီရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်အထိ ရှိတတ်သည်။ ဝမ်းဘဲ၏ သာမန်အော်သံမှာ 'ဂတ်ဂတ်ဂတ်' ဖြစ်သည်။ ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ရွှေလီမြစ်ကဲ့သို့သော မြစ်ကြီးများတွင် ဝမ်းဘဲကို တွေ့ နိုင်ပေသည်။ ဝမ်းဘဲသည် အခြားငှက်များနှင့် ရော၍နေလေ့မရှိချေ။ သို့သော် ဘဲခေါင်းစိမ်း (ဘဲခြေနီ)နှင့်ကား ရော၍နေထိုင်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ထုံးအိုင်များ၌လည်း ဝမ်းဘဲကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဝမ်းဘဲသည် ရေမျက်နှာပြင်တွင်သာ အစာရှာဖွေသော ငှက်မျိုးဖြစ်သည်။ ထုံးအိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ စပါးပင်များကို စားပစ်သည်ထက် ခြေနှင့်နင်းပစ်ခြင်းကြောင့် ပို၍ပျက်စီး စေသည်။ ဝမ်းဘဲ၏ အနှစ်သက်ဆုံးအစာမှာ ရေပိုးရေမွှားများ၊ ဖားများနှင့် တီကောင်များဖြစ်သည်။
ဝမ်းဘဲ (သို့) ဂျားမ
A male Indian Spotbill
A. p. poecilorhyncha တမ်းပလိတ်:Taxobox authority
A. (p.) zonorhyncha တမ်းပလိတ်:Taxobox authority
A. p. haringtoni တမ်းပလိတ်:Taxobox authority
ဝမ်းဘဲသည် အသိုက်ကို အပင်များ ဖုံးအုပ်နေသော မြေကြီးပေါ်တွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ထိုအသိုက်များသည် ရေနှင့်အတော်ဝေးဝေးတွင် ရှိတတ်သည်။ ဘဲရိုင်းများသည် သားပေါက်ချိန်၌ အတောင်နှင့် အမြီးရှိ အတောင်ရှည်များ လဲလှယ်ရန် ကျွတ်ကုန်ကြလေသည်။ ထိုသို့ အတောင်များကျွတ်နေစဉ်တွင် ဝမ်းဘဲသည် အသိုက်မှ အလွန်ထွက်ခဲသည်။ တစ်ခါ အုလျှင် ဝမ်းဘဲသည် ရှစ်ဥမှ ဆယ်ဥအထိ အုတတ်သော်လည်း တခါတရံတွင်မူ ၁၄ ဥအထိ အုတတ်လေသည်။
ဝမ်းဘဲသည် အာရှတိုက် အရှေ့တောင်ပိုင်း၊ ဩစတြေးလျတိုက်၊ ပစိဖိတ်ကျွန်းစုများနှင့် မြောက်ဘက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဆိုက်ဗီးရီးယား အရှေ့ပိုင်းအထိ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်။ ဝမ်းဘဲသည် အန်ဆာရီဖောမီး မျိုးစဉ်တွင် အနာတီဒီး မျိုးရင်းနှင့် အနာတီနီး မျိုးရင်းခွဲတို့တွင် ပါဝင်ပြီးလျှင် ယင်းကို သတ္တဗေဒ(ပါဏဗေဒ‎) အလိုအားဖြင့် အနပ် ပီစီလောရင်းချား ပီစီလောရင်းချား ဟုခေါ်သည်။ ဝမ်းဘဲနှင့် မျိုးစဉ်တူ၊ မျိုးရင်းတူနှင့် မျိုးရင်းခွဲတူ အခြားဘဲတစ်မျိုးမှာ ဘဲခေါင်းစိမ်း၊ဘဲရစ်၊ဘဲအ တို့ဖြစ်သည်။ 
Male (front) and female Chinese Spotbills (A. (p.) zonorhyncha)
↑ BirdLife International (2004). Anas poecilorhyncha. 2006. IUCN Red List of Threatened Species. International Union for Conservation of Nature 2006. www.iucnredlist.org. Retrieved on 11 May 2006. Database entry includes justification for why this species is of least concern
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝမ်းဘဲ&oldid=546592" မှ ရယူရန်
၁၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၄:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၄:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။